प्रचण्डको सातो जानेगरि देउवाले चाले यस्तो भयङ्कर कदम, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डको सातो जानेगरि देउवाले चाले यस्तो भयङ्कर कदम, अब के हुन्छ ?
काठमाडौ। हुम्लाको लिमी लाप्चासहित नेपाल–चीन सीमामा देखिएको सीमा विवाद अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छानविन समिति बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा चिन्ता छाएको छ । खासगरी चीननिकट नेताहरु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चिन्तित बनेका छन् ।
चीनले भूमि मिचेको सीमावासी नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले छानविन समिति बनाउँदा चीन निकट नेताहरु आत्तिएका हुन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेता आत्तिए पनि एक इन्च भूमि नछोड्ने रणनीतिका साथ देउवाले चिनियाँबाट अतिक्रमण भएको लाप्चासहित क्षेत्रमा अध्ययन टोली खटाएका हुन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा जिल्लामा पनि चलखेल सुरु भएको छ ।
माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी छानविन टोलीविरुद्ध माहोल बनाउन खटाएको छ । अघिल्लो वामपन्थी सरकारले चिनियाँ अतिक्रमण ढाकछोप गरेका बेला अहिले सत्ता गठबन्धनका वामपन्थी दलले पनि चिनियाँ बदमासी बाहिर आउन नदिन सबै संयन्त्र परिचालन गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा टोली अहिले लाप्चामा छानविनमा छ ।
तर छानविनलाई सोही क्षेत्रको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले असहयोग गरेका छन् । उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् । प्रचण्डको निर्देशनमा काठमाडौं आएर, चिनियाँ राजदूतावासका अधिकारीसँग भेटेर चीनले भूमि नमिलेको भनेर अभियान चलाउँदै हिँडेका छन् । अध्यक्ष तामाङ तिनै व्यक्ति हुन् जसले कुनै समय चीनले सीमा मिचेको भनेर छानविनको माग गरेका थिए ।
तर केन्द्रमा चिनियाँसँग मन मिलेपछि उनी अहिले विवाद नै नभएको भनेर जिकिर गर्दै हिँडेका छन् । अध्यक्ष तामाङलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै खटाएको बुझिएको छ । आफ्नो गाउँपालिका भन्दा अधिकांश समय काठमाडौंमै रहने तामाङले प्रचण्डसँगै चिनियाँ प्रतिनिधि पनि भेटिसकेका छन् । आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म तामाङले चीनले सीमा मिचेको छैन भन्ने न्यारेटिभ तयार पार्न खोजेका छन् । तर सरकारी टोली छानविनमा सक्रिय छ । रोकिएको छैन ।
वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले चिनियाँहरूले करिब डेढ किलोमिटर वर ललुङजोङको नेपाली भूमीमा आएर भवनहरू बनाएको बताएका थिए । नाम्खाका उपाध्यक्ष पेमा तामाङले पनि भवनहरू नेपाली भूमिमै बनेको पाइएको बताए । भवनहरू नेपाली भूमिमा रहे पनि सरकारले हतारोमा सो भूमि चीनकै स्वामित्वमा रहेको बताउँदा स्थानीयहरू भने चिन्तितसँगै आक्रोशित भएको उनले बताएका थिए ।
यसै गरि, मापसे परीक्षण गर्दा भक्तपुरमा प्रहरीलाई दुर्व्यवहार, एकजना पक्राउ पारेका छन्। दुर्व्यवहार गरेको’ आरोपमा प्रहरीले भक्तपुरबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–५ स्थित सल्लाघारीमा ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ४२ वर्षीय सोमनाथ अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ ।
जगातीबाट सल्लाघारीतर्फ जाँदै गरेको बा.९ च २७६३ नम्बरको कारमा सवार अधिकारीलाई चेकजाँच गर्न खोज्दा उनले प्रहरीसँग विवाद गरेका थिए । महानगरीय प्रहरी प्रभाग कटुन्जे र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टिमसँग विवाद गरेर उनले मापसे परीक्षण गर्ने ब्रेथलाइजर फुटाएको बताइएको छ । अधिकारीमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ ।